Mogadishu Journal » QM iyo Ethiopia oo ka wada hadlay adkeynta xuquuqul Insaanka
QM iyo Ethiopia oo ka wada hadlay adkeynta xuquuqul Insaanka
Mjournal :-Madaxa hay’adda xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay , Michelle Bachelet, ayaa sheegtay in Xafiiskeeda uu Dowladda Itoobiya ka caawin doono caqabadaha ka haysta xuquul Insaanka.
Mss; Bachelet, oo Magaalada Addiis ababa kula kulantay, Madaxweynaha Dalka Itoobiya , Sahle-Work Zewde, ayaa sheegtay in ay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo dhiirri gelin lahaa is-beddelada iyo fursadaha ka jira Dalkaasi.
Michelle Bachelet, ayaa sidoo kale sheegtay in ay ku hanweyntay hirgelinta waxyaabihii ay ka wada hadleen iyada iyo Madaxweyne, , Sahle-Work Zewde, maaddaama uu golaha Wasiirrada ee Dalkaasi yahay kala bar Dumar, kaas oo ah Dalka koobaad ee muhiimadda siiya Haweenka marka la eego Qaaradda Afrika.
Horraantii 2018-kii, markii la la doortay Ra’iisul wasaare Abiy Axmed, waxaa Dalka Itoobiya xilal kala duwan oo ay ku jiraan kuwo muhiim ah loo dhiibay Haween , waxaana kala bar golaha wasiirrada laga dhigay Dumar, iyadoo sidoo kale ay Madaxweyne ka noqotay , Sahle-Work Zewde, taas oo keentay in lala dagaallamo musuqa, lana yareeyo tacaddiyada ka dhanka xuquuqul Insaanka.
Mid ka mid ah wasiirradii uu magacaabay Lafta-Gareen oo is-Casilay
Jeneral Thomas oo banaynaya jagada Taliyaha Ciidanka Maraykanka ee Qaaradda Afrika